ဖတျမရသူတအေောကျအထိဆှဲကွညျ့ပါ Soul land နိုဗယျ2အပိုငျး 33 ပထမပိုငျး - kokochitchit.xyz
အပိုငျး ၃၃ ပထမပိုငျးသူတို့ ဝိဉာဉျရိုးရပွီး ရုံခနျးအပွငျကို ထှကျလာတော့..ရှောငျရှောငျက..” ဒီ ဝိဉာဉျရိုးကို ယှီဟောကျကိုပေးလိုကျရအောငျ”။ ဝမျတုံလဲ..သဘောတူတယျဆိုပွီး ခေါငျးညှိတျလိုကျတယျ။ ယှီဟောကျခေါငျးခါလိုကျပွီး..” ငါ လပျခံလို့မရဘူး..ဝမျတုံ..” ladies first ” ဆိုတဲ့စကားကို မငျးမနေ့ပွေီးလား၊ မိနျးကလေးကို အရငျဦးစားပေးသငျ့တယျ၊ ရှောငျရှောငျကို ပေးရမယျ။ ငါတို့ ကွိုးစားလို့..နောကျထပျ ဆုတှရေ ရငျ နောကျထပျ ဝိဉာဉျရိုးတှရေမယျ၊ မငျးတို့ငါကို အသငျး ခေါငျးဆောငျအဖွဈ သတျမှတျထားတယျလေ..ဘယျလိုလုပျပွီး..ငါလကျခံမှာလဲ..?”။ ယှီဟောကျက..ဒါရိုကျတာ ဒူဝလေနျက..ဒီဝိဉာဉျရိုးကို သူ့အတှကျ မပွငျဆငျပေးထားဘူးဆိုတာ..သူသိနတေယျ၊ နောကျပွီး..အသငျးခေါငျးဖွဈလို့ ယူလိုကျရငျ..သဘာဝမကျဘူး။ ရှောငျရှောငျက” နို…ယှီဟောကျ..နငျ ပွိုငျပှဲမှာ အဓိက နရောမှာ ဝငျပွိုငျခဲ့တယျ၊ နောကျပွီး နငျက ဒီဝိဉာဉျရိုးကို လိုအပျတယျလေ..”။
ယှီဟောကျက ” ရှောငျရှောငျ..နငျဘာမှ မပွောနဲ့တော့..ဒီ ဝိဉာဉျရိုးကို ငါ မယူဘူးဘို့ ဆုံးဖွတျထားပွီးပွီ။ ငါရဲ့ သိုငျးဝိဉာဉျက စိတျဝိဉာဉျလေ..ငါရဲ့ ကိုယျပိုငျစှမျးရညျကို ငါဘာသာ ငါ ကွိုးစားယူမယျ။ နငျက အမှာသိုငျးဝိဉာဉျလေ.. သိုငျးဝိဉာဉျပွောငျးလဲ နခြေိနျမှာ..ဒီ ဝိဉာဉျရိုးရဲ့ အမွနျနှုနျးနဲ့ဆိုရငျ..နငျအတှကျ ပိုပွီး လုံခွုံမယျ..”။ ရှောငျရှောငျက ” ဟူတျပါပွီး..ဒီဝိဉာဉျရိုးကို ငါလကျခံလိုကျတော့မယျ..ငါတို့ နောကျထပျ ဝိဉာဉျရိုးထပျရရငျ..နငျတို့ ၂ ယောကျထဲက တဈယောကျယူလိုကျပေါ့” ပွောပွီး ဝိဉာဉျရိုးကို သူမရဲ့ ဝိဉာဉျသိုလှောငျ အိတျထဲကို ထညျ့လိုကျတယျ။ ဝမျတုံ ယှီဟောကျဘကျ လှညျ့လိုကျပွီး..” ယှီဟောကျ..မငျး အတှငျးစညျးတပညျ့ မဖွဈခဲ့ဘူး..ဒါက…”။ ယှီဟောကျက ” ဘာမှ ပွောစရာမလိုပါဘူး..ငါအဆငျပွပေါတယျ။ ဒီဟာကို..ငါ စဉျးစားသိခဲ့ပွီးပွီ၊ တကယျလို့ ငါသာ မငျးနဲ့ အတှငျးဈားတပညျ့ ဖွဈသှားပွီး ဆိုပါပွီး၊
မငျးမရှိတဲ့အခါကရြငျ..ငါက ရနျသူကို ဘယ်လို တိုကျခိုကျရမလဲ?.. ဒါကွောငျ့.. ကြောငျးက ပေးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက ငါအတှကျ မြှတပါတယျ၊ သူတို့ကို သကျသပွေနိုငျဖို့အတှကျ ငါ ပိုကွိုးစားရမယျ။ ” ပွောတာ ကောငျးတယျ..” သူတို့နဲ့ ရငျနှီးနတေဲ့အသံ..ဆရာမကျော့က ခဉျြးကပျလာတယျ။ ” ဆရာမကျော့..” ယှီဟောကျတို့ ၃ ယောကျလုံး အံ့သြ သှားတယျ။ ဆရာမက အခနျး ၁ မှာ ဆရာဝမျရနျနဲ့အတူတူ စာသငျနရေမယျမဟုတျလား..ဘယျလိုလုပျပွီး ဒီနရောမှာ ပျေါလာတာလဲ? ဆရာမကျော့က..ပီတိပွညျ့နတေဲ့အကွညျ့နဲ့ ယှီဟောကျကို ကွညျ့လိုကျပွီး..” ယှီဟောကျ..ငါနငျဆီကို လာတာ..ဒီဟာကို နငျသိမွငျခဲ့မယျလို့ ငါမထငျခဲ့ဘူး။
သို့သျောလညျး.. ငါအရမျးပြျောတယျ.. နငျက ငါရဲ့ တပညျ့ချေါဖို့ ထိုကျတနျတယျ။ နငျကို ငါလကျဆောငျပေးစရာရှိတယျ…။ ဆရာမကြော့က သူမရဲ့ ဝိဉာဉျသိုလှောငျအိတျကို ထုတျလိုကျတယျ။ မဟုတျမှလှဲ?… ရှောငျရှောငျက သူမရဲ့ ဝိဉာဉျရိုးထညျ့ထားတဲ့အိတျကို ထုတျလိုကျတယျ။ ဆရာမ ကြော့ အံ့သြ သှားပွီး…” ဒါ…ဒါကို ကြောငျးက..နငျတို့ကို ဆုအဖွဈပေးတယျ?”။ဆရာမ ကြော့ အံသွ သှားပွီး ” ဒါကွောငျ့..ဆရာဒူက..လြိုလြိုဝှကျဝှကျနဲ့ လုပျနတောကို..ဘာဝိဉာဉျရိုး အမြိုးစားလဲ?”။ ယှီဟောကျက ဆရာမကျော့ကို အကုနျရှငျးပွလိုကျတယျ။ ဆရာမကျော့ ခေါငျးညှိတျလိုကျပွီး ” နငျတို့က အရမျးတျောတဲ့ကလေးတှပေဲ.. ဝိဉာဉျအငျပါယာအဆငျ့တှေ မပွောနဲ့..ဝိဉာဉျတု့လု့ အဆငျ့တှတေောငျ..ဒီလိုဝိဉာဉျရိုးကို တှရေ့ငျ..သူတို့ကို သူတို့ ထိနျးခြုပျ မတညျငွိမျနိုငျဘူး။
ငါက နငျကို ဝိဉာဉျရိုးလာပေးမလို့..ဘာလို့လဲဆိုတော့..နငျနဲ့ ထိုကျတနျလို့ပဲ။ နငျတို့ နငျထငျးတို့အသငျးနဲ့ တိုက်ခိုက်တုန်းက မှတျမိသေးလား? အဲ ပွိုငျပှဲတုနျးက ငါ သူတို့ရဲ့ ဆရာမနဲ့ လောငျးကွေးထပျခဲ့တယျ။ ဒါက..အရညျအသှေး နညျးနညျးညံ့တဲ့ ဝိဉာဉျရိုးပဲ..သူ့ကို တဈခွား ဝိဉာဉျရိုး ၂ ခုနဲ့ပေါငျးစပျရမယျ။ ဒါကို လိုအပျနတေဲ့သူ အတှကျတော့..အဖိုးအဖွတျနိုငျတဲ့အရာပဲ၊ ဒါပမေယျ့..တဈခွား ဝိဉာဉျရိုး ၂ခုကို တှဖေို့က..အခှငျ့အရေးနညျးတယျ။ဒါက ဘယျဘကျလကျဝိဉာဉျရိုးပဲ၊ သူ့ကို လြှိုဝှကျ ဝိဉာဉျရိုး နိယာမ လို့ချေါတယျ။ ဒီလိုဝိဉာဉျရိုးကို ရဖို့ဆိုရငျ..မြိုးတူ..နှဈ ၁ သိနျး ဝိဉာဉျသားရဲကို တဈနာရီအတှငျး သတျရမယျ၊ တောကျပွီး..လြိုဝှကျတဲ့ နညျးပညာနဲ့ ဝိဉာဉျကှငျးကို စုပျယူမှ..ဒီလိုဝိဉာဉျရိုးကို ထုတျပေးတယျ။ ဒီနညျးလမျးကို ဝိဉာဉျမာစတား အများစုက မအောငျမွငျကွဘူး။ ဒီဝိဉာဉျရိုးသာ ရရငျ..နငျရဲ့ ဝိဉာဉျစှမျးအားကို ၅ % တိုးပေးတယျ။ မမြားပမေယျ့..ဝိဉာဉျအဆငျ့ မွငျ့လာရငျ..ရာခိုငျနှုနျးက ပိုမြားလာမယျ ။
ယှီဟောကျက ဆရာမကြော့ပေးတဲ့ ဝိဉာဉျရိုးအိတျကိုယူပွီး ဝမျတုံဘကျ လှညျ့လိုကျခြိနျမှာ ဝမျတုံက ” ငါကို မကွညျ့ဘူး..၊ ငါမယူဘူး..ဒီဝိဉာဉျရိုးက ငါအတှကျ အရမျးကို ရိုးရိုးဖွဈစတေယျ။ ယှီဟောကျက ဝမျတုံ သူ့ကို ယူစခေငျြနတောကို သိတယျ။ ဒါကွောငျ့..ထို လြှိုဝှကျဝိဉာဉျရိုးနိယာမကို သူ့အိတျထဲ သိမျးလိုကျတယျ။..ထိုအခြိနျမှာပဲ ရခေဲပိုးကောငျက ” အာ.. ဒီဝိဉာဉျရိုးက အရမျး အသုံးဝငျတာပဲ..၊အခု အရငျသိမျးထားလိုကျ..သူ့ကို အသုံးပွုဖို့..မငျးကို ငါ ကူညီပေးမယျ..”။ ” အကို ကောငျးကငျအိမျမကျ”. .ယှီဟောကျ ကခေဲပိုးကောငျက ” ရှောငျယှီဟောကျ..စိတျဓါတျမကပြါနဲ့၊ ဒီက အကိုကွီး မငျးကို ထောကျပံ့နတောပဲ။ အဲလူတှကေ အရမျးကို အမွငျကဉျြးလှနျတယျ၊ ဒီအကိုကွီးရဲ့ နှဈ ၁ သနျးဝိဉာဉျကှငျးကို ၁၀ နှဈ သကျတမျးလို့ ထငျနကွေတယျ၊ မငျးစိတျမပူပါနဲ့။ နောကျနှဈအနညျးငယျကရြငျ..သူတို့ ဒီ ၁၀ နှဈသကျတမျး ဝိဉာဉျကှငျး ပွနျတှတေဲ့အခါကရြငျ..တုနျးလှုပျသှားစရေမယျ။
ငါထပျပွောလိုကျမယျ..ဝိဉာဉျအဆငျ့ ၂၀ ကိုရောကျအောငျ မွနျမွနျလုပျ။ အဲအခြိနျကရြငျ..မငျးကို ဘယ်သူမှ အထငျမသေးစရေဘူး။ယှီ ဟောကျက ” အာ့..ကတြျော ဝိဉာဉျအဆငျ့ ၂၀ ကို ဒီ ပထမနှဈ မကုနျခငျ ရောကျစရေမယျ”။ ဆရာမကျော့က ” ဝမျတုံနဲ့ ရှောငျရှောငျ..နငျတို့..အရငျပွနျနှငျ့လိုကျ၊ ငါ ယှီဟောကျနဲ့ပွောစရာရှိတယျ။ဝမျတုံတို့ ထှကျသှားပွီးခြိနျမှာ ဆရာမကျော့က ယှီဟောကျရဲ့ လက်ကို ကိုငျပွီး..ပြံသှားလိုကျတယျ။ ယှီဟောကျအံ့ သွ သှားပွီး ” ဆရာမကျော့.. ဆရာဖနျယု့က ကတြေျာ့ကို သူ့တပညျ့အဖွဈ လကျခံတာလား? ဆရာမကျော့က ” နငျက..တျောသာပဲ၊ ဒါပမေယျ့..နငျကို ငါသတိပေးလိုကျမယျ၊ ဒုယနှဈ ကို တကျဖို့က ဝိဉာဉျကှငျး ၂ ကှငျးရှိရမယျ၊ ဒါကွောငျ့..နှဈ မကုနျခငျ ဝိဉာဉျအဆငျ့ ၂၀ ကိုရောကျအောငျလုပျရမယျ။
နငျက..ဝိဉာဉျလကျနကျကိုလလေ့ာပမေယျ့..ဝိဉာဉျစှမျးအားဘကျမှာ အောကျခွေ ခိုငျရမယျ၊ ဒါကွောငျ့ နငျရဲ့ အခြိနျကို..စီမံခနျ့ခှဲပါ။ ဆရာမကျော့က ယှီဟောကျကို ဝိဉာဉျလကျနကျ စမျးတပျတဲ့ နရောဆီ ချေါသှားတယျ။ သူတို့ဆီကို ထနျယု့ လြှောကျလာတယျ။ ဖနျယု့..ယှီဟောကျရဲ့ ပခုံးကို ကိုငျလိုကျပွီး ” မငျးရဲ ဖျိုငျနယျ ပှဲစဉျကို ငါ ကွညျ့ခဲ့ရတယျ၊ အရမျးမိုကျတဲ့ပှဲပဲ..မငျးကောငျးကောငျးလုပျနိုငျခဲတယျ”။ယှီ ဟောကျက ရိုရိုသသေနေဲ့ ” ဆရာ ဖနျယု့ကို..နှုတျဆကျပါတယျ”။ ဖနျယု့ခေါငျးညှိတျလိုကျပွီး..” မငျးရဲ့ ဝိဉာဉျဝမြှေခွငျးစှမျးရညျကို ငါ ဆရာမကျော့ဆီကနေ ကွားခဲ့တယျ..လာ စမျးကွညျ့ရအောငျ။ ထို့နောကျ ယှီဟောကျက သူ့ရဧ့ ဝိဉာဉျ ဝမြှေတဲ့ စှမျးရညျကို ဆရာဖနျယု့ဆီ ဝမြှေလိုကျတယျ။ ” အကွာအဝေက ၅၀ မီတာလောကျရှိတယျ…အာ..တျောတျောတိုးတကျလာပွီး..ဒါကွောငျ့ မငျးတို့ ချန်ပီယံ ဖွဈသှားတာကို..ဒီဟာနဲ့ဆိုရငျ..ရနျသူရဲ့ တိုက်ကွက်ကို ကွိုသိနရေပွီး”။ ထိုအခြိနျမှာပဲ..ယှီဟောကျက သူ့ရဲ့ ဝမြှေခွငျးစှမျးရညျကို ဦးတညျခကျြတဈခုပဲ လုပျလိုကျခြိနျမှာ.. ဆရာမကျော့လဲ ဝမြှေခွငျး ခံထားရတဲ့အတှကျ..” နငျဘယျလို လုပ်လိုက်တာလဲ?”။ ယှီစောကျ..ဘာမှ မပွောပဲ..ဆကျပွီး..အကွာအဝေကို တိုးလိုက်ကာ.. လဈမဈ ဂိတျဆုံးရောကျသှားမှ ရပျလိုကျတယျ။ ဖနျယု့က ယှီဟောကျကို ကွညျ့လိုကျပွီး ” အကွာအဝေး..၁၂၁ မီတာ? …ကောငျးတယျ..ယှီဟောကျ မငျးရဲ့ ဝိဉာဉျအဆငျ့ တိုးလာတာနဲ့ အကှာဝေးက ပိုဂေးလာတာလား?”။ ယှီဝေါကျခေါငျးညှိတျလိုကျတယျ။ ဖနျယု့ စမျးတပျတဲ့ကှငျးကို လြှောကျသှားပွီး..” ခြိုကျထုနျ..ဒီကိုလာအုံး..” ၊ ခြိုကျခုနျရောကျလာတော့..” မငျးလား..ယှီဟောကျ မတှရေ့တာ ကွာပွီးနျော”။ ဖနျယု့က ခြိုကျထုနျ..ဝိဉာဉျလကျနကျမာစတားတှကေ ဘယျလောကျထိ စှများးကွီးလဲ ဆိုတာ ယှီဟောကျကို ပွလိုကျတယျ။ ” ဟုတျကဲ့ ” ဆိုပွီး.. ခြိုကျထုနျရဲ့ခါးပတျကနေ..သတ်တု ပစ်စညျးတှေ သူ့ရဲ့ ခန်ဓညကိုယျထဲ တပျဆငျလာတယျ။ ငယျငယျတုနျးက ကွညျ့တဲ့ ပါဝါရိန်ကျာ စကျရုပျ လိုပေါ့ ၊ သူ့ဆီကနေ အဝါ ၂ ကှငျး ၊ ခရမျး ၁ ကှငျးထှကျလာတယျ ဇာတျသိမျးမြှျော
အပိုင်း ၃၃ ပထမပိုင်းသူတို့ ဝိဉာဉ်ရိုးရပြီး ရုံခန်းအပြင်ကို ထွက်လာတော့..ရှောင်ရှောင်က..” ဒီ ဝိဉာဉ်ရိုးကို ယွီဟောက်ကိုပေးလိုက်ရအောင်”။ ဝမ်တုံလဲ..သဘောတူတယ်ဆိုပြီး ခေါင်းညှိတ်လိုက်တယ်။ ယွီဟောက်ခေါင်းခါလိုက်ပြီး..” ငါ လပ်ခံလို့မရဘူး..ဝမ်တုံ..” ladies first ” ဆိုတဲ့စကားကို မင်းမေ့နေပြီးလား၊ မိန်းကလေးကို အရင်ဦးစားပေးသင့်တယ်၊ ရှောင်ရှောင်ကို ပေးရမယ်။ ငါတို့ ကြိုးစားလို့..နောက်ထပ် ဆုတွေရ ရင် နောက်ထပ် ဝိဉာဉ်ရိုးတွေရမယ်၊ မင်းတို့ငါကို အသင်း ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်လေ..ဘယ်လိုလုပ်ပြီး..ငါလက်ခံမှာလဲ..?”။ ယွီဟောက်က..ဒါရိုက်တာ ဒူဝေလန်က..ဒီဝိဉာဉ်ရိုးကို သူ့အတွက် မပြင်ဆင်ပေးထားဘူးဆိုတာ..သူသိနေတယ်၊ နောက်ပြီး..အသင်းခေါင်းဖြစ်လို့ ယူလိုက်ရင်..သဘာဝမက်ဘူး။ ရှောင်ရှောင်က” နို…ယွီဟောက်..နင် ပြိုင်ပွဲမှာ အဓိက နေရာမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်၊ နောက်ပြီး နင်က ဒီဝိဉာဉ်ရိုးကို လိုအပ်တယ်လေ..”။
ယွီဟောက်က ” ရှောင်ရှောင်..နင်ဘာမှ မပြောနဲ့တော့..ဒီ ဝိဉာဉ်ရိုးကို ငါ မယူဘူးဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။ ငါရဲ့ သိုင်းဝိဉာဉ်က စိတ်ဝိဉာဉ်လေ..ငါရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကို ငါဘာသာ ငါ ကြိုးစားယူမယ်။ နင်က အမွှာသိုင်းဝိဉာဉ်လေ.. သိုင်းဝိဉာဉ်ပြောင်းလဲ နေချိန်မှာ..ဒီ ဝိဉာဉ်ရိုးရဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ဆိုရင်..နင်အတွက် ပိုပြီး လုံခြုံမယ်..”။ ရှောင်ရှောင်က ” ဟူတ်ပါပြီး..ဒီဝိဉာဉ်ရိုးကို ငါလက်ခံလိုက်တော့မယ်..ငါတို့ နောက်ထပ် ဝိဉာဉ်ရိုးထပ်ရရင်..နင်တို့ ၂ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ယူလိုက်ပေါ့” ပြောပြီး ဝိဉာဉ်ရိုးကို သူမရဲ့ ဝိဉာဉ်သိုလှောင် အိတ်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ်။ ဝမ်တုံ ယွီဟောက်ဘက် လှည့်လိုက်ပြီး..” ယွီဟောက်..မင်း အတွင်းစည်းတပည့် မဖြစ်ခဲ့ဘူး..ဒါက…”။ ယွီဟောက်က ” ဘာမွ ပြောစရာမလိုပါဘူး..ငါအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီဟာကို..ငါ စဉ်းစားသိခဲ့ပြီးပြီ၊ တကယ်လို့ ငါသာ မင်းနဲ့ အတွင်းစာ်းတပည့် ဖြစ်သွားပြီး ဆိုပါပြီး၊
မင်းမရှိတဲ့အခါကျရင်..ငါက ရန်သူကို ဘယ္လို တိုက်ခိုက်ရမလဲ?.. ဒါကြောင့်.. ကျောင်းက ပေးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ငါအတွက် မျှတပါတယ်၊ သူတို့ကို သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် ငါ ပိုကြိုးစားရမယ်။ ” ပြောတာ ကောင်းတယ်..” သူတို့နဲ့ ရင်နှီးနေတဲ့အသံ..ဆရာမေက်ာ့က ချဉ်းကပ်လာတယ်။ ” ဆရာမေက်ာ့..” ယွီဟောက်တို့ ၃ ယောက်လုံး အျံ့သ သွားတယ်။ ဆရာမက အခန်း ၁ မွာ ဆရာဝမ်ရန်နဲ့အတူတူ စာသင်နေရမယ်မဟုတ်လား..ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီနေရာမှာ ပေါ်လာတာလဲ? ဆရာမေက်ာ့က..ပီတိပြည့်နေတဲ့အကြည့်နဲ့ ယွီဟောက်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး..” ယွီဟောက်..ငါနင်ဆီကို လာတာ..ဒီဟာကို နင်သိမြင်ခဲ့မယ်လို့ ငါမထင်ခဲ့ဘူး။
သို့သော်လည်း.. ငါအရမ်းပျော်တယ်.. နင်က ငါရဲ့ တပည့်ခေါ်ဖို့ ထိုက်တန်တယ်။ နင်ကို ငါလက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်…။ ဆရာမကျော့က သူမရဲ့ ဝိဉာဉ်သိုလှောင်အိတ်ကို ထုတ်လိုက်တယ်။ မဟုတ်မှလွဲ?… ရှောင်ရှောင်က သူမရဲ့ ဝိဉာဉ်ရိုးထည့်ထားတဲ့အိတ်ကို ထုတ်လိုက်တယ်။ ဆရာမ ကျော့ အျံ့သ သွားပြီး…” ဒါ…ဒါကို ကျောင်းက..နင်တို့ကို ဆုအဖြစ်ပေးတယ်?”။ဆရာမ ကျော့ အံသြ သွားပြီး ” ဒါကြောင့်..ဆရာဒူက..လျိုလျိုဝှက်ဝှက်နဲ့ လုပ်နေတာကို..ဘာဝိဉာဉ်ရိုး အမျိုးစားလဲ?”။ ယွီဟောက်က ဆရာမေက်ာ့ကို အကုန်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ ဆရာမေက်ာ့ ခေါင်းညှိတ်လိုက်ပြီး ” နင်တို့က အရမ်းတော်တဲ့ကလေးတွေပဲ.. ဝိဉာဉ်အင်ပါယာအဆင့်တွေ မပြောနဲ့..ဝိဉာဉ်တု့လု့ အဆင့်တွေတောင်..ဒီလိုဝိဉာဉ်ရိုးကို တွေ့ရင်..သူတို့ကို သူတို့ ထိန်းချုပ် မတည်ငြိမ်နိုင်ဘူး။
ငါက နင်ကို ဝိဉာဉ်ရိုးလာပေးမလို့..ဘာလို့လဲဆိုတော့..နင်နဲ့ ထိုက်တန်လို့ပဲ။ နင်တို့ နင်ထင်းတို့အသင်းနဲ့ တိုက္ခိုက္တုနး္က မှတ်မိသေးလား? အဲ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ငါ သူတို့ရဲ့ ဆရာမနဲ့ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါက..အရည်အသွေး နည်းနည်းညံ့တဲ့ ဝိဉာဉ်ရိုးပဲ..သူ့ကို တစ်ခြား ဝိဉာဉ်ရိုး ၂ ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ရမယ်။ ဒါကို လိုအပ်နေတဲ့သူ အတွက်တော့..အဖိုးအဖြတ်နိုင်တဲ့အရာပဲ၊ ဒါပေမယ့်..တစ်ခြား ဝိဉာဉ်ရိုး ၂ခုကို တွေ့ဖို့က..အခွင့်အရေးနည်းတယ်။ဒါက ဘယ်ဘက်လက်ဝိဉာဉ်ရိုးပဲ၊ သူ့ကို လျှိုဝှက် ဝိဉာဉ်ရိုး နိယာမ လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလိုဝိဉာဉ်ရိုးကို ရဖို့ဆိုရင်..မျိုးတူ..နှစ် ၁ သိန်း ဝိဉာဉ်သားရဲကို တစ်နာရီအတွင်း သတ်ရမယ်၊ တောက်ပြီး..လျိုဝှက်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဝိဉာဉ်ကွင်းကို စုပ်ယူမှ..ဒီလိုဝိဉာဉ်ရိုးကို ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ဝိဉာဉ်မာစတား အမ်ားစုက မအောင်မြင်ကြဘူး။ ဒီဝိဉာဉ်ရိုးသာ ရရင်..နင်ရဲ့ ဝိဉာဉ်စွမ်းအားကို ၅ % တိုးပေးတယ်။ မများပေမယ့်..ဝိဉာဉ်အဆင့် မြင့်လာရင်..ရာခိုင်နှုန်းက ပိုများလာမယ် ။
ယွီဟောက်က ဆရာမကျော့ပေးတဲ့ ဝိဉာဉ်ရိုးအိတ်ကိုယူပြီး ဝမ်တုံဘက် လှည့်လိုက်ချိန်မှာ ဝမ်တုံက ” ငါကို မကြည့်ဘူး..၊ ငါမယူဘူး..ဒီဝိဉာဉ်ရိုးက ငါအတွက် အရမ်းကို ရိုးရိုးဖြစ်စေတယ်။ ယွီဟောက်က ဝမ်တုံ သူ့ကို ယူစေချင်နေတာကို သိတယ်။ ဒါကြောင့်..ထို လျှိုဝှက်ဝိဉာဉ်ရိုးနိယာမကို သူ့အိတ်ထဲ သိမ်းလိုက်တယ်။..ထိုအချိန်မှာပဲ ရေခဲပိုးကောင်က ” အာ.. ဒီဝိဉာဉ်ရိုးက အရမ်း အသုံးဝင်တာပဲ..၊အခု အရင်သိမ်းထားလိုက်..သူ့ကို အသုံးပြုဖို့..မင်းကို ငါ ကူညီပေးမယ်..”။ ” အကို ကောင်းကင်အိမ်မက်”. .ယွီဟောက် ကေခဲပိုးကောင်က ” ရှောင်ယွီဟောက်..စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့၊ ဒီက အကိုကြီး မင်းကို ထောက်ပံ့နေတာပဲ။ အဲလူတွေက အရမ်းကို အမြင်ကျဉ်းလွန်တယ်၊ ဒီအကိုကြီးရဲ့ နှစ် ၁ သန်းဝိဉာဉ်ကွင်းကို ၁၀ နှစ် သက်တမ်းလို့ ထင်နေကြတယ်၊ မင်းစိတ်မပူပါနဲ့။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကျရင်..သူတို့ ဒီ ၁၀ နှစ်သက်တမ်း ဝိဉာဉ်ကွင်း ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျရင်..တုန်းလှုပ်သွားစေရမယ်။
ငါထပ်ပြောလိုက်မယ်..ဝိဉာဉ်အဆင့် ၂၀ ကိုရောက်အောင် မြန်မြန်လုပ်။ အဲအချိန်ကျရင်..မင်းကို ဘယ်သူမွ အထင်မသေးစေရဘူး။ယွီ ဟောက်က ” အာ့..ကျတော် ဝိဉာဉ်အဆင့် ၂၀ ကို ဒီ ပထမနှစ် မကုန်ခင် ရောက်စေရမယ်”။ ဆရာမေက်ာ့က ” ဝမ်တုံနဲ့ ရှောင်ရှောင်..နင်တို့..အရင်ပြန်နှင့်လိုက်၊ ငါ ယွီဟောက်နဲ့ပြောစရာရှိတယ်။ဝမ်တုံတို့ ထွက်သွားပြီးချိန်မှာ ဆရာမေက်ာ့က ယွီဟောက်ရဲ့ လက္ကို ကိုင်ပြီး..ပျံသွားလိုက်တယ်။ ယွီဟောက်အံ့ သြ သွားပြီး ” ဆရာမေက်ာ့.. ဆရာဖန်ယု့က ကျတော့်ကို သူ့တပည့်အဖြစ် လက်ခံတာလား? ဆရာမေက်ာ့က ” နင်က..တော်သာပဲ၊ ဒါပေမယ့်..နင်ကို ငါသတိပေးလိုက်မယ်၊ ဒုယနှစ် ကို တက်ဖို့က ဝိဉာဉ်ကွင်း ၂ ကွင်းရှိရမယ်၊ ဒါကြောင့်..နှစ် မကုန်ခင် ဝိဉာဉ်အဆင့် ၂၀ ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်။
နင်က..ဝိဉာဉ်လက်နက်ကိုလေ့လာပေမယ့်..ဝိဉာဉ်စွမ်းအားဘက်မှာ အောက်ခြေ ခိုင်ရမယ်၊ ဒါကြောင့် နင်ရဲ့ အချိန်ကို..စီမံခန့်ခွဲပါ။ ဆရာမေက်ာ့က ယွီဟောက်ကို ဝိဉာဉ်လက်နက် စမ်းတပ်တဲ့ နေရာဆီ ခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ဆီကို ထန်ယု့ လျှောက်လာတယ်။ ဖန်ယု့..ယွီဟောက်ရဲ့ ပခုံးကို ကိုင်လိုက်ပြီး ” မင်းရဲ ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကို ငါ ကြည့်ခဲ့ရတယ်၊ အရမ်းမိုက်တဲ့ပွဲပဲ..မင်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲတယ်”။ယွီ ဟောက်က ရိုရိုသေသေနဲ့ ” ဆရာ ဖန်ယု့ကို..နှုတ်ဆက်ပါတယ်”။ ဖန်ယု့ခေါင်းညှိတ်လိုက်ပြီး..” မင်းရဲ့ ဝိဉာဉ်ဝေမျြှခင်းစွမ်းရည်ကို ငါ ဆရာမေက်ာ့ဆီကေန ကြားခဲ့တယ်..လာ စမ်းကြည့်ရအောင်။ ထို့နောက် ယွီဟောက်က သူ့ရဧ့ ဝိဉာဉ် ဝေမျှတဲ့ စွမ်းရည်ကို ဆရာဖန်ယု့ဆီ ဝေမျှလိုက်တယ်။ ” အကြာအေဝက ၅၀ မီတာလောက်ရှိတယ်…အာ..တော်တော်တိုးတက်လာပြီး..ဒါကြောင့် မင်းတို့ ခ်န္ပီယံ ဖြစ်သွားတာကို..ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်..ရန်သူရဲ့ တိုက္ကြက္ကို ကြိုသိနေရပြီး”။ ထိုအချိန်မှာပဲ..ယွီဟောက်က သူ့ရဲ့ ဝေမျြှခင်းစွမ်းရည်ကို ဦးတည်ချက်တစ်ခုပဲ လုပ်လိုက်ချိန်မှာ.. ဆရာမေက်ာ့လဲ ဝေမျြှခင်း ခံထားရတဲ့အတွက်..” နင်ဘယ်လို လုပ္လိုက္တာလဲ?”။ ယွီစောက်..ဘာမွ မပြောပဲ..ဆက်ပြီး..အကြာအေဝကို တိုးလိုက္ကာ.. လစ်မစ် ဂိတ်ဆုံးရောက်သွားမှ ရပ်လိုက်တယ်။ ဖန်ယု့က ယွီဟောက်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး ” အကြာအေဝး..၁၂၁ မီတာ? …ကောင်းတယ်..ယွီဟောက် မင်းရဲ့ ဝိဉာဉ်အဆင့် တိုးလာတာနဲ့ အကွာဝေးက ပိုဂေးလာတာလား?”။ ယွီဝေါက်ခေါင်းညှိတ်လိုက်တယ်။ ဖန်ယု့ စမ်းတပ်တဲ့ကွင်းကို လျှောက်သွားပြီး..” ချိုက်ထုန်..ဒီကိုလာအုံး..” ၊ ချိုက်ခုန်ရောက်လာတော့..” မင်းလား..ယွီဟောက် မတွေ့ရတာ ကြာပြီးနော်”။ ဖန်ယု့က ချိုက်ထုန်..ဝိဉာဉ်လက်နက်မာစတားတွေက ဘယ်လောက်ထိ စွမ်ားးကြီးလဲ ဆိုတာ ယွီဟောက်ကို ပြလိုက်တယ်။ ” ဟုတ်ကဲ့ ” ဆိုပြီး.. ချိုက်ထုန်ရဲ့ခါးပတ်ကနေ..သတ္တု ပစ္စည်းတွေ သူ့ရဲ့ ခန္ဓညကိုယ်ထဲ တပ်ဆင်လာတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်တဲ့ ပါဝါရိန္က်ာ စက်ရုပ် လိုပေါ့ ၊ သူ့ဆီကနေ အဝါ ၂ ကွင်း ၊ ခရမ်း ၁ ကွင်းထွက်လာတယ် ဇာတ်သိမ်းမျှော်